Qorshayaasha Sahyuuniyadda ‘Zionist’ ee Bariga Dhexe - Diblomaasi
Qorshayaasha Sahyuuniyadda ‘Zionist’ ee Bariga Dhexe
Qorshayaasha Sahyuuniyadda ‘Zionist’ ee Bariga Dhexe: Theodor Engström wuxuu sharraxayaa dagaallada reer galbeedka ee bariga dhexe iyo dokumentiga «A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm» Istaraatiijiyad cusub oo lagu xaqiijinayo boqortooyada” kaas oo tilmaamaya toddobo himilooyin oo ka socda Zionist.
Marka hore aan qeexno, Waa Maxay Sahyuuniyadda ‘Sionism’?
Sahyuuniyadda waa fikrad iyo dhaqdhaqaaq wadaniyeed oo ka dhex jira dadka Yuhuudda ah oo taageersan dib-u-dhiska iyo taageerida dowlad Yuhuud ah oo ku sugan dhulka lagu qeexay Dhulka taariikhiga ah ee Israa’iil. Sahyuuniyadda waa dadaal diimeed iyo siyaasadeed oo ay keeneen kumanaan Yuhuud ah oo ka kala yimid adduunka oo dhan inay dib ugu soo laabtaan dalkooda qadiimiga ah ee Bariga Dhexe isla markaana dib loogu soo celiyo Israa’iil oo ah meesha ugu muhiimsan ee aqoonsiga Yuhuudda.
Sawirka: Shirweynihii 21aad ee Sahyuuniyadda 1939 / waa sawir laga soo qaaday Wikipedia. Kadib abuuritaankii Dawladdii Israa’iil sanadkii 1948, diirada WZO waxay u weecisay kor u qaadista socdaalka Israa’iil iyo isku xidhka Yuhuudda adduunka oo dhan – gaar ahaan dhalinyarada – Israa’iil Maanta waxay kormeertaa miisaaniyadda qiyaastii $ 30 milyan, waxayna leedahay awood wada jir ah oo ku saabsan miisaaniyadda $ 475 milyan ee Wakaaladda Yuhuudda.
Inkasta oo dadka wax naqdiya qaarkood ay ugu yeeraan Sahyuuniyadda fikrad dagaal iyo midabtakoor ah, dhaqdhaqaaqa Sahyuuniyadda wuxuu si guul leh u aasaasay dhul Yuhuud ah oo ka tirsan waddanka Israa’iil. Haddii si fudud loo dhigo, Sionism waa dhaqdhaqaaq dib loogu abuurayo joogitaanka Yuhuudda ee Israa’iil. Magaca ayaa ka yimid ereyga “sion” “Siyoon,” oo ah erey Cibraani ah oo loola jeedo Qudus “Jerusalem”.
In kasta oo falsafadaha aasaasiga ah ee dhaqdhaqaaqa Sahyuuniyadda uu jiray boqollaal sano, Sionism-ka casriga ah wuxuu si rasmi ah u aasaasay dabayaaqadii qarnigii 19aad. Waqtigaas, Yuhuudda adduunka oo idil waxay la kulmeen nacayb-nacayb sii kordhaya.
Taariikhyahannada qaar waxay aaminsan yihiin in aragtidaan ay tahay aragti soo bilaawmay oo u dhexeeysay Yuhuudda iyo reer Yurub oo laga yaabo inay kicisay dhaqdhaqaaqa Sahyuuniyadda. Hal dhacdo 1894, sarkaal Yuhuudi ah oo ka tirsan ciidanka Faransiiska oo lagu magacaabo Alfred Dreyfus ayaa si been abuur ah loogu eedeeyay laguna xukumay khiyaano qaran. Dhacdadan, oo loo yaqaanay “Dreyfus Affair,” ayaa caro ka dhex dhalisay dadka Yuhuudda ah iyo kuwa kale oo badan.
Si dhaqdhaqaayadooda ugu guulaysteen waxay sameyaan ama ay burbur ka gaystaan dowladaha barriga dhexe. Waxaana la sheegaa inay qeyb libaax leh ku lahayeen aas aaska urur xagjirka ee Daacish. Muddo dhawr sano ah, Dawladda Islaamiga ah (IS),, waxay umuuqataa meel aan jirin, inay ku jirtay ajandaha caalamiga ah ee xasilinta Suuriya. Inkasta oo reer galbeedku ay hadda samaynayaan masraxiyad iyo astaamo “dagaal” ka dhan ah IS (daacish), warbaahinta Sionist waxaa ka buuxa warbixino xasaasi ah oo soo noqnoqonaya oo ku faafaya xumaanta IS iyo qatarta ay ku hayaan shacabka reer galbeedka.
Dhanka kale, si kastaba ha ahaatee, waa ujeeddooyin qarsoon oo ka socda dhacdooyinka ka dhacay halkaas, iyo is faham la’aanta muuqata ee ka dhaxaysa xamaasadda iyo warbixinnada taxaddarka leh ee IS ee ka socda warbaahinta ay maamusho Zionist-ka, iyo sidoo kale dadaallada millatariga Mareykanka ee barkood, kuwaas oo si buuxda gacanta ugu haya Zionist.
Horumarka ka socda Bariga Dhexe waa wax la yaab leh, laakiin waxaa lagu sifeeyay dukumentiyada Sixiraafiya horraantii 1996, magaca «A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm». Daraasaddan dukumintiga ah ayaa ka dhawaajisay wax macquul ah oo ka dambeeya waallida jirta, iyada oo cawaaqibta fog-fog ay ka fog tahay Bariga Dhexe.
Halkaan kala dag dukumintigaas: http://www.dougfeith.com/docs/Clean_Break.pdf
Dukumentiga, oo ay qoreen koox uu hoggaaminayo nin adeerkiis ah oo Mareykan ah Richard Perle, oo loo sii diyaariyay Ra’iisel Wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu, wuxuu sawiraa sawirka dhaqdhaqaaqa joogtada ah ee Zionist ee Israa’iil oo laga yaabo inuu “dhinto” Ajandaha nabada ee dib loogula soo noqonayo dhulkii Israa’iil. Taa bedelkeed, si “dib loogu soo nooleeyo” Zionism loona sugo mustaqbalka Israa’iil, warbixinta ayaa taa bedelkeeda soo jeedineysa in Israa’iil cadaawadda deegaanka “lagu xasillo” isbedel lagu sameeyo nidaamka Ciraaq iyo sidoo kale burburinta Suuriyia “xoogagga matalaya”, oo saldhig u noqon doona saaxiibbada Turkiga iyo Joordan.
Nabad waarta, sida ku xusan Perle, waxaa lagu gaari karaa oo keliya caasimadaha “deriska” ah ee wadamada deriska ah ee cadaawada u leh Yahuudda. Qoraaga hoggaamiyaha Richard Perle waxaa kamid ah in uu dib u bilaabay xubinimadiisii JINSA, waa koox u ololeysa danaha Mareykanka ee danaha Yuhuudda, PNAC, koox caan ku ah fikirka, iyo kooxda Bilderberg, waa kooxda awooda caalamiga ah ee aan muuqan halkaasoo ka qeybgalku marwalba iftiiminayo iftiinka digniinta ee ku wajahan dadka xaqa ah. Waxaa shaki weyn laga qabaa in xubnahu ilaashadaan danaha umada.
Qorshaha waxaa kamid ah in warbaahinada qaar ee internetka abuuraan jahwareer iyo qiil u noqoshada dagaalka ilbaxnimo ee u dhexeeya Islaamka iyo Masiixiyadda.
Maamulka Madaxweyne Bush iyo sidii in badan oo ka horeysay waxay jeclaayeen in Mareykanku aamino in dhibaatooyinka bariga dhexe kajira ay sabab u yihiin asal raaca muslimiinta iyo argagixisada. Xaqiiqdii sababta ugu weyn ee khilaafka ka jirta qaybtaas adduunka waa ‘ism’ kale, oo ah Sionism. Guul darrooyinkii ugu dambeeyay ee masiibada ah ee waxa loo malaynayo inay yihiin siyaasadda arrimaha dibedda Mareykanka ee Bariga Dhexe waxay dib u raadinayaan taageerada Mareykanka ee Sahyuuniyadda.
Inta badan shacabka reer Mareykan waa daacad mana oga sida ay u shaqeyso siyaasadooda arrimaha dibidda ee Mareykanka. Natiijadu waxay tahay in maamuladii kala dambeeyay ee Mareykanka ay sii wadaan inay Israa’iil ku taageeraan cibaado ficil ku dhisan oo aan loo ogoleyn dal kale oo ajnabi ah.
Qorshayaasha ay Israa’iil ka wado Bariga dhexe waa mid Mareykan ku taageero. Go’aannada Qaramada Midoobay ee dhaleeceeyay ficilada Israa’iil sanadihii la soo dhaafay waxaa si joogto ah u hor istaagay Mareykanka, waxaana si cad ugu soo horjeestay Mareykanka.
Madaxda Mareykanka, Israa’iil waxay ku tilmaamaan dal dimuqraadiyad leh, waxayna inta badan dhahaan Israa’iil waa ‘dimuqraadiyad’ iyo ‘xulafadeena’. Xaqiiqdii waxay leedahay qaabdhismeedka dimoqraadiyadda, laakiin loogu talagalay Yuhuudda oo keliya.
Miyaad aamminsan tahay in Israa’iil ay tahay inay ahaato bulsho dimuqraadi ah oo ixtiraamaysa xuquuqda madaniga ah ee dadkeeda tirada yar?
Miyaad aamminsan tahay in dawladda Israa’iil ay tahay inay si isku mid ah u siiso dhammaan durdurrada diinta Yuhuudda, oo ayna ula dhaqmin Yuhuudda Orthodox sida “rasmiga” Yuhuudda?
Miyaad aamminsan tahay in haweenka Israa’iil ay leeyihiin xuquuq loo siman yahay xagga safarka, lebbiska, shaqada, iyo tukashada sida ay rabaan?
Miyaad aamminsan tahay in Israel ay tahay inay wax badan ka qabato siinta fursad dhaqaale iyo shabakad badbaado oo loogu talagalay muwaadiniinteeda ugu saboolsan?
Miyaad aamminsan tahay in Israa’iil ay u baahan tahay laba dowladood si ay ugu sii noolaato dowlad Yuhuud iyo dimoqraadi ah? Iyo inay si aad ah ugu baahan tahay hoggaamiyeyaal leh geesinimo ay ku hiigsadaan yoolkaas?
Haddii madaxda Mareykanka ay ka dhab tahay nabadeynta Bariga dhexe waxay dhaleeceyl iyo ka hortag ku sameyn lahayeen Israa’iil oo isbalaariska wada, laakiin ma aysan noqonin waxaana ka muuqato taageerida qorshaha sahyuuniyiinta. Marka laga soo tago madaxda Muslimiinta, shacabka muslimiinta maanta waxay aaminsan yihiin dowladda Mareykan inay tahay mid kamid ah dowladdaha dhuunta u galay, una diidan in ay muslimiinta si xor ah ugu noolaadaan koonkaan dushiisa. Islaam nacaybka ka jira gudaha dalka Mareykanka waxaa lagu tilmaami karaa kalsooni darrada iyo cadaawada loo qabo Muslimiinta, Islaamka, iyo kuwa loo arko inay raacaan diinta oo ay u muuqdaan inay ka tirsan yihiin diinta iyo kooxaha la shaqeeya.
Islaam nacaybka ka jira dalka Mareykanka ayaa sare u kacay tan iyo bishii Sebtember 11, 2001. Markii ugu horreysay ee hadal heynta ka dhanka ah muslimiinta ee ka soo yeera hogaamiyaasha siyaasada waxay timid bishii Sebtember 2015, kuna soo beegantay iyadoo la kordhiyay warbixinada ku saabsan dhibaatada sii kordheysa ee qaxootiga Suuriya. Waxay mar kale kor u kacday kadib weeraradii argagixiso ee ka dhacay Paris bishii Nofeembar 2015 iyo San Bernardino bishii Diseembar 2015.
Intii lagu gudajiray 2015, dambiyada naceybka ah ee muslimiinta waxay ahaayeen heerarkii ugu sareeyay tan iyo qaraxii daaraha Mareykanka 9/11. Warbixino ka kooban 174 waxay soo wariyeen dhacdooyinka rabshadaha ka dhanka ah muslimiinta ay sare u kaceen sanadihii u dambeeyey.
Sawirka waxa ku qoran muslim kasta oo dhab ah waa mujaahid.
Islaam-naceybka waxaa kaloo weheliya baaqyo ka imanaya qaar ka mid ah siyaasiyiinta Mareykanka oo ku aadan siyaasadaha xagjirka ah iyo naceybka ah sida kormeerka xaafadaha Muslimiinta, xirida masaajida, ama ka mamnuuca Muslimiinta inay gebi ahaanba soo galaan Mareykanka. Toban gobol oo Mareykanka kamid ah ayaa soo saaray sharciyo ka dhan ah Islaamka.
Diinta Islaamku waa diinta ugu faafida badan Reer Galbeedka. Si kastaba ha noqotee, reer Galbeedku waxay leeyihiin fikrado badan iyo fikrado khaldan oo ku saabsan Islaamka oo ay ugu wacan tahay: Cunsuriyada iyo Jaahilnimada warbaahinta. Islaamka waxaa badanaa loo arkaa inuu yahay “xagjir”, “argagixiso”, ama “aasaasi” diin ah. Dad badan ayaa neceb Islaamka oo aan rabin inay qiraan barashadiisa saxda ah. Islaamku waa diin qurux badan, oo xikmad iyo iswaafajin ka buuxdo. Islaamku waa diin jacayl iyo nabad. Jacaylku waa mid ka mid ah mabaadi’da iyo astaamaha aadanaha ugu sharafta badan ee kobciya ruuxa is-dhexgalka, wadajirka, iyo iskaashiga oo jacaylka ku dara isxariiris iyo macaamilka dadka.
Nabaddu waxay imaan kartaa oo keliya haddii jahwareerka Israa’iil wado lagu xukumo. Tan uma baahna in dawladda Israa’iil ‘lagu dhex riixo badda’ sida ay dacaayadaha Sionist-ku sheeganayaan (waa eedeyn qosol leh oo ku hoos jirta duruufaha ay tahay dhibbanayaasha Sionism-ka lagu tuuray badda – iyo xeryaha qaxootiga) laakiin si fudud inay ugu nooshahay xuduudaheeda oo ay ula dhaqanto dhammaan dadka deggan si cadaalad ah. Hoggaanka hadda jira ee Sahyuuniyadda si cad uma doonayaan inay aqbalaan waxyaabahan, laakiin taasi way is beddeli kartaa waana inay isbedesho. Cashir kasta oo kale waxay u horseedaa masiibo qof walba. Runta weligeed laguma badhaadhi karo.
Related Topics:FalanqeynQorshayaasha Sahyuuniyadda ‘Zionist’ ee Bariga DhexeVideo
Maxaa sababay in Sacuudi Carabiya iyo Qadar furaan xuduudaha hawada, dhulka iyo badda?
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay Jimcihii go’aankan in ay sabab u tahay waxa ay ku tilmaantay in Lubnaan ay ku guuldareysatay in ay joojiso isku daygii lagu doonayay in dalkaasi lagu soo geliyo daroogo, iyadoo la soo geliyo alabaha ka imaanaya Lubnaan.
Sacuudi Carabiya ayaa ku amartay safiirka Lubnaan u fadhiya Boqortooyada inuu 48 saacadood gudahood uga baxo jimcihii, waxayna mamnuucday dhammaan wax soo dejinta Lubnaan, taasoo jawaab u ah hadallo dhaleecayn ah oo uu wasiir Lubnaani ka jeediyay faragelinta milatari ee Sucuudigu hoggaaminayo ee Yemen.
Muranka ka dhashay hadaladii dhaleecayn ahaa ee uu wasiirka warfaafinta Lubnaan George Kordahi ka jeediyay faragelinta milatari ee Sucuudigu hogaaminayo ee Yemen ayaa waxa ay dhalisay baaqyo ka soo yeedhay qaar ka mid ah siyaasiyiinta sarsare ee ku baaqaya in Kordahi uu is casilo, halka qaar kalena ay ka soo horjeesteen tallaabadaas.
Sacuudi Carabiya ayaa dalkeeda ka ceyrisay ergaygii Lubnaan, waxayna mamnuucday dhammaan wax soo dejinta Lubnaan Jimcihii, sida lagu yaqanaay dowladaha Khaliijka Bahrain iyo Kuwait ayaana raacay arrintaas, iyagoo diblomaasiyiinta sare ee Lubnaan u qabtay 48 saacadood inay kaga baxaan.
Khilaafkan ayaa ka dhashay hadallo xasaasi ah oo uu jeediyay wasiirka warfaafinta Lubnaan George Kordahi (Qardaaxi) oo ku aadanaa dagaalka milatari ee Sucuudigu hoggaaminayo ee ka socda Yemen, taasi oo xaalad cakirnaan gelisay dalkaasi, iyadoo loogu baaqayo in Kordahi uu is casilo.
Haddii uu Kordahi is casilo, wasiirrada ay taageerto kooxda Xisbullah iyo xisbiga Amal ee ay xulafada yihiin ayaa laga yaabaa in ay iyaguna is-casilaan, xilli dowladda Lubnaan uu cuuryaamiyay muran ku saabsan baaritaanka qarixii weynaa ee Agoosyo 2020-kii ka dhacay dekedda Beirut.
Ra’iisul wasaare Najib Mikati ayaa fiidnimadii Jimcaha weydiistay Kordahi in uu tixgeliyo “danta qaranka” Lubnaan, isaga oo ku sigtay in uu weydiisto in uu xilka iska casilo.
Kordahi ayaa taageero cad ka helaya Xizbullah, waxaana uu diiday in uu bixiyo raalligelin ama is-casilo hadalka uu jeediyay awgii, taasi oo keentay dhaawicii ugu xumaa ee gaara xiriirka Sacuudiga iyo lubnaan tan iyo 2017-kii xilligaasi oo ay boqortooyadu magaalada Riyadh ku xirtay ra’iisul wasaarihii xilligaasi ee Lubnaan Sacad Al-Hariri.
Jaamacadda Carabta ayaa bayaan ay soo saartay Sabtida maanta ah ku sheegtay in ay ka walaacsan tahay xiriirka xumaaday ee Lubnaan iyo dalalka Khaliijka, waxayna ka codsatay wadamada Khaliijka in ay “ka fiirsadaan tallaabooyinka ay soo jeediyeen in ay qaadayaan, si aysan taasi uga sii darin xaaladda dhaqaalaha Lubnaan ee sii liicaya.”
Xoghaya Guud ee Jaamacadda Carabta Axmed Aboul Gheit ayaa bayaan uu soo saaray ku muujiyay “walaaca qotoda dheer iyo sida uu uga qoomameynayo sida dhakhsaha leh ee uu ku xumaaday xiriirka lubnaan iyo Khaliijka.”
Ra’iisul wasaare Mikati ayaa dadaal ugu jiray hagaajinta xiriirka Lubnaan iyo dalalka Khaliijka kaasi oo sanado badan aan hagaagsaneyn saameynta ay kooxda taageerada ka hesha Iran ee Xisbullah ku leedahay dowladda Lubnaan awgeed.
Sacuudi Carabiya: Hezbollah waxay ‘maamulaysaa dhammaan xarumaha Lubnaan’
“Argagixisada Hezbollah waxay gacanta ku haysaa dhammaan xarumaha Lubnaan,” ayay wasaaraddu tiri iyadoo tixraacaysa dhaqdhaqaaqa Lubnaan ee xulafada la ah Iiraan, oo ah gobolka ay xafaaltamaan Sucuudiga.
Ra’iisul wasaarihii hore ee Lubnaan, Sacad Xariiri, ayaa Jimcihii eeda khilaafka Beirut ee Sucuudiga iyo dalalka kale ee Khaliijka si toos ah dusha uga tuuray kooxda Xisbullah ee ay Iiraan taageerto.
“Mas’uuliyadda, oo ay ugu horreyso, arrintan waxaa iska leh Xisbullah, iyo cadaawadda ay qiratay ee ay u qabto Carabta iyo dalalka Khaliijka Carabta,” ayuu siyaasiga Sunniga ah ku yiri bartiisa Twitter-ka.
Xizbullah ayaa soo saartay bayaan ay ku ammaanayaan hadalka Kordahi Khamiistii. Riyadh ayaa ku eedaysay Xisbullah inay taageerto fallaagada Yemen.
Hezbollah waa xisbi siyaasadeed oo Shiico Islaami ah oo Lubnaan ah iyo koox mintidiin ah oo la aas aasay iyada oo ay jirto qalalaasihii dagaalkii sokeeye ee Lubnaan 1975-1990. Lubnaan ayaa hadda la kulmeysa dhibaatadii dhaqaale ee ugu xumayd tan iyo colaadda sokeeye.
Falanqeyn: Markii Sacuudi Carabiya duqeyay Xuutiyiinta 2014, waxay sheegeen in dagaalku uu dhammaan doono toddobaadyo gudahood. Hase yeeshee dagaalka sokeeye ayaa weli socda ilaa toddoba sano, iyadoo Xuutiyiinta ay weli ku sugan yihiin caasimadda Sanca.
Dagaalka u dhexeeya isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo iyo fallaagada Xuutiyiinta ee Yemen oo ay Iiraan taageerto ayaa sii wada waxyeelaynta dadka rayidka ah, barakicinta ka socota gobolka, iyo xaddididda gargaarka bani’aadamnimada.
Bishii Febraayo 2021, fallaagada Xuutiyiinta waxay bilaabeen weerar ay ku doonayaan inay ku qabsadaan Maarib, oo ah xaruntii ugu dambaysay ee dawladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay, horraantii bishii Maarso, fallaagada Xuutiyiinta ayaa gantaallo ku qaaday Sucuudiga, oo ay ku jiraan bartilmaameedyada booyadaha saliidda iyo tas-hiilaadka iyo garoomada caalamiga ah. Isbaheysiga uu Sacuudigu horkacayo ayaa jawaab ka bixiyay kororka weerarada iyadoo duqeymo cirka ah lala beegsaday Sanca, caasimadda Yemen. Weerarka ayaa ahaa isku dhacii ugu dhimashada badnaa tan iyo sanadkii 2018 -kii, waxaana ku dhintay boqolaal dagaalyahanno ah, waxaana adkaatay geedi socodka nabadda.
Dagaallada ka socda galbeedka Yemen. Isku dhaca Tariq Saalax iyo Axmed Cali?
Ka dib markii la sheegay in gantaal Xuuthi ah iyo weerar diyaaradeed ay ku dhufteen ciidamada ay taageerto Sucuudiga saldhig milatari oo ku yaal koonfur-galbeed Yemen 29-kii Ogoosto, dagaal cusub ayaa ka dhex qarxay xoogagga fallaagada Xuutiyiinta iyo cadowgooda isbahaysiga.
Dhacdadan ka dib, oo ay ku dhinteen ugu yaraan 30 askari oo taageersan dowladda 60 kalena lagu dhaawacay, Xuutiyiinta ayaa lagu soo waramayaa inay weerar xagga cirka ah ku qaadeen garoonka Abha ee Sacuudi Carabiya, iyagoo dhaawacay sideed, isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaaminayo ayaa sidaas sheegay.
Xuutiyiinta ayaa ku dhawaaqay inay ka dambeeyeen weerarka garoonka, inkastoo aysan sheegan inay ka dambeeyeen dhacdadii dhimashada badnayd ee ka dhacday saldhigga milateri ee Al-Anad oo u dhow Cadan.
Isbaheysiga ayaa sidoo kale ka hortagay weerar labaad oo lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee koonfurta Sacuudi Carabiya, oo ay inta badan bartilmaameedsadaan kooxda raacsan Iiraan. Isbahaysigu wuxuu ku dhawaaqay in tallaabadani “ay ka dhigan tahay dembi dagaal,” taas oo muujinaysa in xiisaddu dhab ahaantii mar kale sii kici karto.
Gundhiga dagaalka Yemen,
Dagaalkii sokeeye ee Yemen wuxuu billowday 2014 markii fallaagada Xuutiyiinta — fallaagada Shiicada oo xiriir la leh Iiraan ay ku qaadeen kacdoon ka dhan ah dowladda Sunniga ahayd ee ay la wareegeen gacan ku haynta caasimadda Yemen iyo magaalada ugu weyn, Sanca, iyagoo dalbanaya sicirka shidaalka oo hooseeya iyo dowlad cusub. Wadahadallo fashilmay ka dib, fallaagadu waxay qabsadeen qasriga madaxtooyada bishii Janaayo 2015, taasoo keentay in madaxweyne Cabdi Rabbu Mansour Haadi iyo xukuumaddiisu ay iscasilaan.
Bilowgii bishii Maarso 2015, isbaheysiga dalalka Khaliijka oo uu hoggaaminayo Sacuudi Carabiya waxay bilaabeen olole go’doon dhaqaale iyo duqeymo xagga cirka ah oo ka dhan ah fallaagada Xuutiyiinta, iyada oo taageero xagga saadka iyo sirdoonka ka helaayo Mareykanka.
Madaxweyne Cabdi Rabbu Mansour Haadi ayaa ka noqday iscasilaadiisa wuxuuna dib ugu soo laabtay Cadan bishii Sebteember 2015, tan iyo markaasna dagaalku wuu sii socday.
Dadaalka Qaramada Midoobey ee wada-xaajoodka nabadda ee u dhexeeya fallaagada Xuutiyiinta ee isbahaysiga la leh iyo dawladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay ayaa istaagay xagaagii 2016. Laga soo bilaabo bishii Diseembar 2017, Madaxweyne Haadi ayaa lagu soo warramayay inuu musaafuris ahaan ku noolaa Sucuudiga.
Bishii Luulyo 2016, Xuutiyiinta iyo dowladdii madaxweynihii hore Cali Cabdalla Saalax, oo xukunka laga tuuray 2011 kadib ku dhawaad ​​soddon sano oo ay xukunka hayeen, ayaa ku dhawaaqay sameynta “gole siyaasadeed” oo xukuma Sanca iyo inta badan waqooyiga Yemen. Si kastaba ha noqotee, bishii Diseembar 2017, Saalax wuxuu jebiyey Xuutiyiinta wuxuuna ugu baaqay taageerayaashiisa inay hubka u qaadaan. Cali Cabdalla Saalax waa la dilay ciidamadiisana waxaa lagu jabiyey laba maalmood gudahood.
Faragelinta awoodaha gobolka ee colaadda Yemen, oo ay ku jiraan Iiraan iyo waddamada Khaliijka oo uu hormuud u yahay Sacuudi Carabiya, waxay saadaashaasi sheegaysaa in ay dalka usoo jiidi doonaan kala qaybsanaan ballaaran ee Sunniga iyo Shiicada. Hub fara badan oo Iiraan u dirtay fallaagada Xuutiyiinta ayaa lagu qabtay gacanka Cadmeed markii ay badda Sucuudigu xannibtay tan iyo bishii Abriil 2015. Iyada oo ka jawaabaysa arrintaas, Iiraan waxay soo dirtay kolonyo ciidan oo u gaar ah, taas oo sii halis gelineysa kororka milateri ee labada dal.
Dhanka kale, iskahorimaadku wuxuu sii wadaa inuu si ba’an u waxyeeleeyo dadka rayidka ah ee Yemen, taasoo Yemen ka dhigaysa masiibada bani’aadamnimo ee ugu xun dunida. QM ayaa ku qiyaastay in 131,000 oo ka mid ah qiyaasta 233,000 ee ku dhimatay Yemen tan iyo 2015 ay ka dhasheen sababaha aan tooska ahayn sida cunno yari iyo helitaan la’aanta adeegyada caafimaadka.
Ku dhawaad ​​shan iyo labaatan milyan oo Yemeniyiin ah ayaa weli u baahan gargaar, shan milyan ayaa halis ugu jira macaluul, daacuun dillaacayna wuxuu saameeyay in ka badan hal milyan oo qof. Dhammaan dhinacyada iskahorimaadka ayaa lagu soo waramayaa inay ku xadgudbeen xuquuqda aadanaha iyo sharciga caalamiga ah ee bani’aadamnimada.
Marka laga reebo dagaalka sokeeye ee socda, Maraykanku wuxuu sii wadaa hawlgallada la-dagaallanka argagixisada ee Yemen, isaga oo inta badan ku tiirsan duqeymaha cirka si loo beegsado al-Qaacidada Jasiiradda Carabta (AQAP) iyo mintidiinta la xiriira Dawladda isku magacawday Dawladda Islaamka.
Sannadkii 2016 -kii, Mareykanka ayaa duqeymo lagu qiyaasay 35 ka fuliyay Yemen; sanadkii 2017, waxay samaysay ilaa 130. Bishii Abriil 2016, Maraykanku wuxuu geeyay koox yar oo ciidan ah si ay ula taliyaan una caawiyaan ciidamada Sucuudigu hoggaaminayo si ay dhul uga qabsadaan AQAP. Bishii Janaayo 2017, hawlgal ay fuliyeen Ciidamada Hawlgallada Gaarka ah ee Mareykanka ee ka dhacay bartamaha Yemen ayaa lagu dilay hal askari oo Mareykan ah, dhowr qof oo looga shakisan yahay dagaalyahanno xiriir la leh AQAP, iyo tiro aan la garanayn oo rayid Yemen ah.
“Gantaal la sheegay in Xuuthiyiintu la beegsadeen saldhig milatari oo ku yaal koonfur-galbeed Yemen ayaa dilay ugu yaraan 30 askari oo taageersan dowladda”
Weeraradan dilaaga ah ayaa imanaya kadib markii ay sii kordheen rabshadaha ka jira gobolka Maarib ee lagu muransan yahay, kaas oo Xuutiyiintu ay isku dayayeen inay ku qabsadaan weerar soo cusboonaaday tan iyo bishii Febraayo.
1dii Sebteembar, 65 fallaagada Xuutiyiinta ah iyo askar dawladda taageersan ayaa la dilay iyada oo kooxda fallaagadu isku dayday inay qabsato magaalada Maarib ee istiraatiijiga ah. Xuutiyiinta ayaa weeraray fariisimo ay dowladdu ku leedahay koonfurta magaalada, halka ay sidoo kale ku waayeen dhowr dagaalyahan duqeymaha cirka ee isbahaysiga.
In kasta oo Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ballanqaaday dadaallada lagu soo afjarayo dagaalka Yemen horaantii sannadkan, haddana sida muuqata rabshaduhu waa ay sii kordhayaan, taasoo walaac ka muujineysa wax ku oolnimada qaabka uu u wajahayo colaadda.
Doorka xiisaha leh ee Imaaraadka
Isutagga Imaaraadka Carabta (UAE), iyo wakiilkiisa Golaha Ku-meelgaarka Koofureed (STC), ayaa hubaal ah inay qaateen door la yaab leh kadib weeraradii dhimashada badnaa ee lagu qaaday saldhigga milateri ee al-Anad.
Imaaraadka ayaa sheegay inay ka baxeen Yemen, runtiina waxay inta badan dib u cabireen ciidamadooda marka la barbar dhigo 2019 kahor heshiiskii Riyaad. Si kastaba ha ahaatee, waxay weli ka hawlgashaa joogitaanka milateri qaybo ka mid ah koonfurta waxayna STC u adeegsatay inay ku xoojiso gacan-ku-haynta geostrategic-ka koonfurta Yemen intii uu socday dagaalkii lixda sano socday.
Xallinta colaadda Yemen,
Xallinta colaadda Yemen ayaa fursad siin doonta isu soo dhawaanshaha Iiraan iyo Sucuudiga, sidaas darteedna waxay yareyn doontaa xasilloonida gobolka. Sidoo kale, maadaama Waqooyiga Yemen ay beesha caalamku taageeri doonto inay tahay dowlad gaar ah oo hoos timaada xukunka Xuutiyiinta, xiriirka diblumaasiyadeed ee Sacuudiga iyo Xuutiyiinta ayaa la bilaabmi kara. Waxayna yeelan doontaa laba natiijo oo togan. Mid waa ilaalinta xuduuda Sucuudiga, iyo qalabyo heer sare ah sida garoomada diyaaradaha iyo warshadaha sifeeya shidaalka, weerarada Xuutiyiinta.
Midda labaad ayaa ah joojinta joogtada ah ee duqeymaha cirka ee Sacuudiga, oo ay ku dhinteen kumanaan qof. Sidoo kale, xannibaadda ayaa meesha laga saari doonaa oo gargaarka caalamiga ah ayaa fursad heli doona. Markaa, gudaha iyo gobol ahaanba, kala qaybsanaanta Yemen waxay caddayn kartaa inay tahay tallaabada ugu muhiimsan ee la qaadi karo si loogu hortago kala qeybsanaanta loona istaago xagga nabadda ee gobol.
Boqolaal Falastiiniyiin ah ayaa ka dalbaday iscasilaada madaxweyne Maxamuud Cabaas, mudaaharaad ka dhacay daanta galbeed ee Sabtidii oo ka dhashay dhimashadii bishii tagtay ee qof u dhaqdhaqaaqa oo xabsiga ku jira.
Ehelada Nizar Banat, oo dhintay kadib markii ciidamada amaanka ay weerareen gurigiisa si xoog ahna ay u xireen, ayaa safka hore kaga jiray mudaharaadka ka socda magaalada Ramallah oo uu ka taliyo maamulka Falastiin ee Maxamed Cabbaas.
Banat hooyadiisa oo barooranaysa waxay kor u taagtay sawirka wiilkeeda. Bannaanbaxayaasha ayaa sidoo kale watay sawirrada Banat, oo si weyn u dhaliila musuqmaasuqa lagu eedeeyay ee ka dhex jira PA, halka kuwa kalena ay kor u taageen banner weyn oo ay ku xardhan yihiin ereyada “Abbas Leave”, ayuu yiri weriye ka tirsan AFP.
“Mudaharaadkani waa fariin daacad u ah Nizar Banat iyo mas’uuliyiinta, kuwaas oo ay tahay inay cadaaladda horkeenaan kuwii ka dambeeyay dilkiisa,” ayuu Xasan Khreishah, madaxii hore ee Golaha Sharci dejinta Falastiin, sida uu u sheegay AFP.
Booliska Falastiin iyo ciidamada amaanka ayaa xiray wadada hor marta xarunta dhexe ee Cabbaas ee Ramallah.
Dibadbax looga soo horjeedo oo ay soo abaabuleen kooxda Cabbaas ee Fatax ayaa sidoo kale lagu qabtay magaalada Hebron si loogu muujiyo taageerada hogaamiyaha Falastiin.
Nizar Banat oo aad u dhalleeceyn jiray maamulka Cabaas, islamarkaana u taagnaa doorashooyinka baarlamanka ee la rabay in la qabto bishii Abriil, balse la baajiyey ayaa geeriyooday kadib markii ay xireen ciidamada ammaanka maamulka kadibna ay si xun u jir dileen.
Ciidamada Maamulka Falastiiniyiinta iyo rag dharcad ah ayaa si rabshado leh u kala eryey dad dibad-baxan oo kale dhigayey toddobaad kahor, taasi oo keentay walaac ay muujiyeen Mareykanka iyo madaxa xuquuqda aadanaha QM. Dibad-bixii Sabtida ayaan laga soo werin wax rabshado ah.
Dibad-baxa ayaa ku billowday dhowr boqol oo isugu soo baxay Fagaaraha Al-Manara e ebartahama Ramallad, halkaasi oo xarun u ah Maamulka Falastiiniyiinta.
Hooyada Nizar Banat, dhaq-dhaqaaqaha ay geeridiisa bishii tagtay ay horseeday dibad-baxyada, iyo xubno ka mid ah qoyskooda ayaa soo dhoweeyey dibad-baxyada ayaga oo halkaas ka jeediyey khudbado.
Dibad-baxayaasha ayaa kadib aaday faras magaalada, waxaana kadib kusoo biiray kumanaan qof oo ku qeylinayey “Shacabku waxay doonayaan in taliska uu dhaco, oo uu Cabaas naga tago,” ereyadaas oo ka mid ah kuwii ay adeegsan jireen dibad-baxayaashii dalalka Carabta ee qeybta ka ahaa kacdoonkii Guga Carabta.
Ciidamada ammaanka ayaa xirtay waddo gasho xarunta dowladda, si ay uga hortagaan in dibad-baxayaasha ay gudbaan.
Maamulka Falastiiniyiinta ayaa sagaashamaadkii lagu aas-aasay heshiis nabadeed, wuxuuna maamulaa qebo ka mid ah Daanta-Galbeed ee Israel ay haysto.
Maamulkan oo uu madaxda ka yahay Cabaas ayaa hadda isku beddelay kali-talis aan haysan taageerada shacabka, waxaana Cabaas uu bishii April baajiyey doorashooyinkii ugu horreeyey ee dhici lahaa muddo 15 sano ah, kadib markii ay caddaatay in xisbigiisa Fatah si xooggan looga adkaan doono. Dagaalkii Gaza ee dhacay bishii May ayaa Cabaas wuxuu ka joogay banaanka, xilli kooxda ay xifaaltamaan ee Xamas oo maamusha Gaza ay heshay taageero ballaaran.
Ibraahim Raisi ayaa ku guuleystay doorashadii madaxweynaha ee jimcihii ka dhacday dalka Iiraan, ka dib markii uu ka adkaaday musharixiinta la tartamaysay oo uu kamid ahaa madaxweyne Xassan Ruuxaani, sida ay kusoo warbixisay warbaahinta dowlada.
Ebraahim Raisi oo ku guuleysatay doorashada ayaa khudbad ka jeediyay telefishinka isaga oo ugu hambalyeeyay madaxweynaha wakhtigiisu dhamaaday ee Xassan Ruuxaani.
“Madaama aan weli si rasmi ah loo shaacin natiijada, waxaan dib u dhigi doonaa hambalyada rasmiga ah, laakiin way iska cadahay cida heshay codadka,” – ayuu yiri Xassan Ruuxaani.
Malaayiin reer Iiraan ah ayaa coddeeyay jimcihii codeyntaas oo markii danbe uu kusoo baxay Raisi oo ah 60 jir garsoore sare ah.
Madaxweynaha la doortay ee Iiraan ayaa waxaa horey Mareykanka uu u saaray cunaqabateyn, kadib markii lagu eedeeyay xadgudubyo ka dhanka ah xuquuqda aadanaha, gaar ahaan dil maxaabiis siyaasadeed tobbaneeyo sano ka hor. – Kaddib kacdoonka waxa uu ku biiray garsoorka waxa uuna dacwad ooge ka soo noqday dhowr magaalo iyadoo uu tababar ka qaadanayay Ayaatullaahi Khamenei, kaas oo madaxweynaha Iiraan noqday 1981-kii.
Raiisi ayaa noqday ku xigeenka dacwad oogaha Tahraan isagoo 25 jir ah. – Isagoo xilkaasi haya ayuu ka mid noqday afar garsoore oo xaakimiin ka ahaa maxkamado si qarsoodi ah loo sameeyay 1988 ee loo yaqaannay “Guddiggii Geerida”.
Tirada rasmiga ah ee dadka dilka ay maxkamadahaasi ku xukumeen ayaanan la ogayn, hasayeeshee kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in 5,000 oo rag iyo haween ayaa la dilay laguna aasay xabaal wadareedyo aanan calaamadaysnayn taas oo ka dhigan dambi ka dhan ah aadanaha. Hogaamiyayaasha Jamhuuriyadda Islaamiga ah ayaanan diidin in dilalkaasi ay dhaceen, hasayeeshee ma ka hadlaan faafaahintooda iyo sharciyadda kiisaska shakhsiyaadka arrintaasi lagu fuliyayba.
Mr Ra’iisi ayaa waxa uu si joogta ah u diiday doorkii uu ku lahaa xukunnada dilka ah. Hasayeeshee waxa uu sidoo kale sheegay in lagu bannaystay fatwo ama xukum diimeed uu soo saaray hogaamiyihii hore ee ruuxiga ahaa Ayaatullaahi Khomeini.
Shan sanadood ka hor waxaa la dusiyay cod laga duubay kulan 1988 dhexmaray Mr Raiisi, dhowr xubnood oo garsoorka ka tirsan iyo kuxigeenkii hogaamiyihii ruuxiga ahaa ee xilligaas Ayaatullaahi Xuseen Cali Montazeri. Codkaas ayaa waxaa laga dhex maqli karaa Montazeri oo dilalka ku tilmaamaya “dambigii ugu waynaa ee la galay taariikhda Jamhuuriyadda Islaamiga ah”. Sanad kaddib Montazeri waxa uu lumiyay booskiisii ahaa inuu badelo Khomeini, taa badalkeedana waxaa markii Khomeini dhintay xilka Hogaamiyaha Ruuxiga ah la wareegay Ayaatullaahi Khamenei.
Raiisi ayaa waxa uu noqday dacwad oogaha Tahraan, kaddibna waxa uu noqday madaxa hay’adda la socota tayada ee qaranka iyo kuxigeenkii ugu horreeyay ee garsoorka, ka hor inta aanan 2014 loo magacaabin dacwad oogaha guud ee Iiraan.
Laba sanadood kaddib, Ayaatullaahi Khamenei ayaa waxa uu u magacaabay inuu madax ka noqdo mid ka mid ah hay’adaha ugu muhiimsan uguna qanisan ee Iiraan, waa Astan-e Quds-e Razavi. Waxa ay hay’addaasi maamushaa mawlacyada siddeedda ah ee Shiicada Imaam Reza ee Mashhad iyo sidoo kale dhowr hay’adood oo kala duwan oo halkaas ka farcama. – Sida ay sheegtay dowladda Mareykanka, waxa ay dhaqaale baaxad leh ku haysataa dhanka dhismaha, beeraha, tamarta, isgaarsiinta iyo adeegyada maaliyadda.
Maxkamadahaasi “ayaa waxa ay dib u qaadeen” kumannaan maxaabiis ah oo markii horaba xabsiga loo dhigay dhaqdhaqaaqooda siyaasadeed. Qaar badan oo ka mid ah waxa ay xubno ka ahaayeen kooxda mucaaradka ee garabka bidixe ee Mujaahidiin e Khalaq (MEK) oo sidoo kale loo yaqaan Hay’adda Dadka Mujaahidiinta ee Iiraan (PMOI).
Tirada rasmiga ah ee dadka dilka ay maxkamadahaasi ku xukumeen ayaanan la ogayn, hasayeeshee kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in 5,000 oo rag iyo haween ayaa la dilay laguna aasay xabaal wadareedyo aanan calaamadaysnayn taas oo ka dhigan dambi ka dhan ah aadanaha.
Amnest International ayaa ugu baaqday in hoggaamiyaha uu wajahayo dacwado ka dhan ah aadanaha.
Hogaamiyayaasha Jamhuuriyadda Islaamiga ah ayaanan diidin in dilalkaasi ay dhaceen, hasayeeshee ma ka hadlaan faafaahintooda iyo sharciyadda kiisaska shakhsiyaadka arrintaasi lagu fuliyayba.
Mr Raiisi ayaa waxa uu noqday dacwad oogaha Tahraan, kaddibna waxa uu noqday madaxa hay’adda la socota tayada ee qaranka iyo kuxigeenkii ugu horreeyay ee garsoorka, ka hor inta aanan 2014 loo magacaabin dacwad oogaha guud ee Iiraan. Laba sanadood kaddib, Ayaatullaahi Khamenei ayaa waxa uu u magacaabay inuu madax ka noqdo mid ka mid ah hay’adaha ugu muhiimsan uguna qanisan ee Iiraan, waa Astan-e Quds-e Razavi.
Waxa ay hay’addaasi maamushaa mawlacyada siddeedda ah ee Shiicada Imaam Reza ee Mashhad iyo sidoo kale dhowr hay’adood oo kala duwan oo halkaas ka farcama. Sida ay sheegtay dowladda Mareykanka, waxa ay dhaqaale baaxad leh ku haysataa dhanka dhismaha, beeraha, tamarta, isgaarsiinta iyo adeegyada maaliyadda.
2017-kii Mr Raiisi ayaa waxa uu kormeerayaasha kaga yaabsaday inuu u tartamo xilka madaxtinimada. Ruuxaani, oo isna wadaad ah, ayaa waxa uu ku guulaystay muddo xileedkiisii labaad, isagoo guul muhiim ah soo hooyay wareeggii koobaad ee doorashada, markaas oo uu helay 57% ee codadka. Mr Raiisi, oo isku soo bandhigay inuu yahay nin la dagaalama musuq maasuqa hasayeeshee madaxweynaha ayaa waxa uu ku eedeeyay inuusan wax badan ka qaban musuq maasuqa markii uu ahaa kuxigeenka madaxa garsoorka, doorashada xilligaas la qabtayna waxa uu ka helay 38%.
Guuldarradaas waxba uma aanay dhimin jaaha Mr Raiisi iyadoo 2019-kii uu Ayaatullaahi Khamenei uu u magacaabay booska awoodda badan ee madaxa garsoorka. Todobaadkii xigay, ayaa sidoo kale waxaa loo doortay gudiimiye ku xigeenka Golaha Khubarrada, kaas oo ku jiraan 88 wadaad oo mas’uul ka ah doorashada Hogaamiyaha Ruuxiga ah ee xiga.
Intii uu ahaa madaxa garsoorka Mr Raiisi waxa uu sameeyay isbadello horseeday in ay hoos u dhacaan tirada dadka dilka lagu xukumo oo loo dilo falal dambiyeedka la xiriira maandooriyayaasha ee dalkaasi. Sikastaba xaalku ha ahaadee, Iiraan ayaa waxa ay sii waddaa in dad badan ay disho iyadoo arrintaas uu Shiinaha oo kaliya uu kaga horreeyo.
Garsoorka ayaa sidoo kale sii wada inuu la shaqeeyo laamaha ammaanka si howlgal loogu fuliyo mucaaradka iyo in la maxkamadeeyo Iiraaniyiin badan oo laba dhalasho haysto ama ajaaniib daganaanshiyo joogta ah dalkaas ka haysto oo lagu eedeeyo inay basaasiin yihiin.
Markii Mr Raiisi uu ku dhawaaqay inuu u tartamayo xilka madaxtinimada ee doorashada 2021-ka, waxa uu ku dhawaaqay “inuu masraxa si madax bannaan u soo fuulay si uu isbadello uga sameeyo hay’adda fulinta ee dalka iyo inuu la dagaalamo saboolnimada, musuq maasuqa, isdullaysiga iyo takooriadda”.
Wax badan lagama oga nolosha gaarka ah ee Mr Raiisi oo aan ka hayn xaaskiisa Jamiilah, taas oo wax ka dhigta Jaamacadda Shahid Beheshti ee magaalada Tahraan, iyo inay laba carruur ah dhaleen. Waxaa ninkaasi sodog u ah Ayaatullahai Axmed Alamolhoda, oo ah nin mayal adag oo ah khadiibka khudbo Jimcaha ka akhriya masjidka way nee Mashhad.
Sida laga soo xigtay wakaalada wararka ee Reuters, wasaarada arimaha gudaha ayay aheyd inay ku dhawaaqdo natiijada ugu danbeyso maalinta Sabtida iyadoo tirinta codadka ay sii socoto TV-ga dowlada ayaa sidaas sheegay.
Dhanka kale wararka aynu helayno ayaa waxay tilmaamayaan in goor sii horeysay uu shaaciyay telefishinka Dowlda Iiraan in la xiray inta badan goobaha codbixinta ay ka socdeen, halka xarumaha qaarna waqtiga cobixintu ay ku kordhiyeen muddo 2 saacadood.
Afar ka mid ah toddobadii musharax ee kasoo baxay golaha ilaalinta Dasatuurka ayaa ka haray tartanka, maddaama golaha ay la kulmeen dhaleeceyn, taasoo dhalisay walaac ku saabsan doorshada madaxtinimada ee dalkaasi ka socoto.
Ebraahim Raisi ayaa sii ahaan doono madaxa cadaalada ilaa uu kala wareego madaxweynaha xilka kasii degaya ee Xassan Ruuxaani.
Waa kuma Ebraahim Raissi?
Ka hor kacaankii 1979. Ebraahim Raisi wuxuu ku dhashay magaalada Mashad oo ku taal waqooyi-koonfurta Iiraan, magaaladaas oo aheyd magaalo weyn iyo xarumo diimeed oo ay Shiicada muslimiinta maadaama uu ku yaalo mowlaca Imaam Resa oo ahaa Imaamkii sideedaad.
Ka dib markii uu soo barbaaray Raisi, wuxuu helay waxbarasho diineed wuxuuna bilaabay inuu ka qeyb galo seminar-ka magaalada Qom markii uu jiray 15 sano. Halkaas, wuxuu ku bartay culimo dhowr ah oo caanka ah, magaalada oo uu ka mid yahay Khamaani.
Markii waxbarashadiisu u soo idlaatay sido kalena ay socotay dooda madaxweynenida dalka, wuxuu dafiray qaadicay in uu heysto lix fasal oo ah waxbarashada caadiga ah, isaga oo sheegay inuu heysto shahaadada PHD ee dhanka sharciga marka lagu daro waxbarashiisa seminary.
Markii uu galay seminariga waxyar uun ka hor kacaankii 1979ee keenay Jamhuurida Islaamiga ah, ee dadbadan oo reer Iiran ay ka biyo diidsanaayeen aakhirkiina xukunka laga tuuray. Ebraahim Raisi ayaa la sheegaa inuu kamid ahaa dhacdooyinka qaar eek u qasbay in la musaafuriyo Maxammed Reza Shah.
Ka dib kacaankii, Raisi wuxuu ku biiray xafiiska dacwad oogaha ee Masjid Suleymaan, koonfur galbeed ee Iiraan, wuxuu ku darsaday waaya-aragnimadiisa xeer-ilaaliye ee dhowr degmo kale. Horumar muhiim ah ayuu ka sameeyay markii uu yimid caasimada Iiraan, ee Tehraan sandka markuu ahaa 1985 ka dib markii uu noqday ku xigeen xeer ilaaliyaha guud.
Raisi ayaa noqonaya madaweynihii ugu horeyay oo Iiraan ah lagu bartilmaameedsado cuna qabteynta mareykanka, taas oo lagu soo ragay 2019-kii, sababo la xiriira in lasheegay inuu lug ku lahaa dilwadareedyada iyo xakameynta banaanbaxyada dadweynaha.
Xuutiyiinta Yemen oo diyaar u ah wadahadalada nabadeed ee ay martigeliso Qadar
Xubin ka tirsan Golaha Sare ee Siyaasadda ee Xukuumadda Badbaadinta Qaranka ee ay hoggaamiyaan Xuutiyiinta ayaa sheegay in kooxdu ay diyaar u tahay inay ka qayb-qaadato wada-xaajoodyada ay Qadar waddo si ay gacan uga geysato joojinta dagaalka lixda sano ka socda Yemen.
Maxammed Cali Al-Houthi ayaa yiri: “Haddii dalalkii gardarrada ahaa ay si wanaagsan uga jawaabeen dhambaalka Suldaanka Cumaan, waxaan aaminsanahay inaysan jirin wax caqabad ku ah aragtidayada oo ah inaan [shirno] qabanno oo aan dhammaystirno wadahadalka Qadar. “
Qoraal hore oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku yiri: “Waxaan ka mahadcelineynaa dadaalada nabadeed ee Cumaan. Guusha dadaaladaasi waxay kuxirantahay heshiiska wadamada gardarada ah [Isbahaysiga Sacuudiga] iyo sida ay dhab u tahay in la gaaro heshiis macquul ah oo magdhaw laga siiyo ummada khasaaraheeda.”
Cumaan waxay ku leedahay mowqif dhex dhexaad ah gobolka waxayna xiriir la leedahay Sacuudi Carabiya, Iiraan iyo xuutiyiinta, oo si rasmi ah loogu yaqaan Ansarallah. Saldanada waxay qaadatay door muuqda oo dhexdhexaadin ah oo ku saabsan wadahadalada nabada ee UN taageerto bilihii la soo dhaafay, waqtigaas oo Sacuudi Carabiya ay ku dhawaaqday hindisaheeda heshiis nabadeed, inkasta oo tan ay diidey Ansarallah oo shaki ka qabay halista ay leeyihiin.
Toddobaadkii hore wafdi Cumaan ah ayaa booqday caasimada Yemen ee Sanca waxayna la kulmeen hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa Ansarallah, Sayid Cabdulmalik Al-Houthi.
Bishii Febraayo waxaa la soo sheegay in Dooxa ay adeegsaneysay awooddeeda diblomaasiyadeed tan iyo markii la caleema saaray Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden si ay isugu muujiso “dhexdhexaadiye dhexdhexaad ah”, iyada oo horay u fududaysay wadahadal marin-u-celin ah oo dhexmara dawladda Yemen iyo Xuutiyiinta intii u dhaxeysay 2007 iyo 2010.